YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, May 23
ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတာခွဲထွက်ရေး မဖြစ်စေတဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်
ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဟိုးအရင်ထဲကဆုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ မူဝါဒပါ။ ဘယ်သူကမှ ဖယ်ဒရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မပြောခဲ့တဲ့ မပြောရဲတဲ့အချိန်တုန်းကတည်းကတောင်မှ ကျမတို့က ဒီပြည်ထောင်စုကြီး တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့အတွက် ဖယ်ဒရယ်မူဟာ အရေးကြီးတယ်၊ ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတာ ခွဲထွက်ရေးမူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျမတို့ သေသေချာချာ ရှင်းပြတယ်။ မကြာခင်အချိန်တုန်းကဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ပက်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားက ပညာရှင်များက လာပြီးတော့ သင်တန်းတွေ ပေးတဲ့အခါမှာ သူတို့ သေသေချာချာလေး ရှင်းပြသွားတယ်။ ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာ ခွဲထွက်ရေးဘက်ကို တွန်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး၊ ပြောင်းပြန်ပဲ...ခွဲထွက်ရေး မဖြစ်စေတဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ သေသေချာချာ ရှင်းပြသွားပါတယ်။ အဲ့ဒါလဲ ကျမတို့ တချိန်လုံး ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ နှစ် ၂၀ ကျော်ပါပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (21-5-2013) (နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အဆောက်အအုံ- မီဒီယာ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲ)
BY YeYint Nge ... 5/23/2013 1 comment
အိုဘားမား ပြောသလောက် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု မရှိပါဘူး
BY YeYint Nge ... 5/23/20130comment
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အမေရိကန် ခရီးစဉ်အတွင်း ပြောခဲ့သည် ဆိုသော “ဆန္ဒပြသူများသည် ကျပ် ၃,၀၀၀၊ ၅,၀၀၀ ယူ၍ လုပ်ဆောင်နေသည်” ဆိုသည့် စကားအား ရှုံ့ချကြောင်း လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ ဒေါ်နော်အုန်းလှက “ကျွန်မတို့က သမ္မတ ပြောသလို နေ့စားခယူပြီး ဆန္ဒပြနေတာ မပာုတ်ပါဘူး။ကျွန်မတို့ နိုင်ငံက သယံဇာတတွေ မဆုံးရှုံးအောင်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော် နေတာပါ။ဒီလို ပြောတဲ့ သမ္မတကို ကျွန်မတို့ ရှုံ့ ချပါတယ်။” ပာု ပြောသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒပြမှုအား ယနေ့နေ့လည် ၃ နာရီ အချိန်တွင် တာမွေ လမ်းဆုံ မှ စ၍ လမ်းလျှောက်ခဲ့ရာ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြိုနယ်၊ ပုစွန်တောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်များသို့ ဖြတ်၍ နေ့စားခယူ၍ ဆန္ဒပြခြင်း လုံးဝမပာုတ်ပာု ကြွေးကြော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ ကြသည်။
အဆိုပါ ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ ကျပ် နေ့ စားခ ယူ၍ ဆန္ဒပြနေသည်ပာု ပြောသောစကားသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ခရီးစဉ်တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖနိဒါ | ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၅၀ မိနစ်
(စစ်ရေး လေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇော နှင့် အင်တာဗျူး)
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရာစုနှစ် တဝက်ခန့် နှစ်နိုင်ငံ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ အဆက်ပြတ်ခဲ့ရသည့် မြန်မာနှင့် အမေရိကန်တို့ ဆက်ဆံရေးမှာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း လှုပ်ရှားထကြွလာကာ သံတမန် ဆက်ဆံရေးမှသည် နိုင်ငံ့အကြီးအကဲချင်း အပြန်အလှန် လည်ပတ်သည့် ခရီးစဉ်များအထိ
တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး (ဝန်ကြီး) နှစ်ဦး သမ္မတ၏ အမေရိကန် ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါသွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်ချင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဆက်ဆံမှု၊ မြန်မာ့တပ်မတော်အပေါ် အမေရိကန် အလေးထားမှု၊ အာရှ ပစိတ်ဖိတ် ဒေသတွင်း ပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်စပ်နေမှုများကို သုံးသပ်ပေး
နိုင်ရန် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် အခြေစိုက် စစ်ရေး လေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇော အား မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ဖြေ။ ။ ကျနော် သိသလောက်တော့ အမေရိကန်ရဲ့ ပေါ်လစီအပြောင်းနဲ့ မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့လည်း ဒီအတိုင်း ဆက်သွားလို့ မရတော့တဲ့အောက်မှာ၊ သွေးထွက်သံယို မဖြစ်ဘဲနဲ့ ပြောင်းလို့ရမယ်ထင်လို့ ဒီလမ်းကြောင်းကို
သွားကြတာကိုး။ အမှန်က ပြေလည်ရေးပေါ့ဗျာ။ ပြေလည်မယ်ဆိုရင်တော့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက
တော့ ပြဿနာပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပြီးသား ဖြစ်တယ်။ မနှစ်က အိုဘားမား လာတယ်။ အရင် ကလင်တန် လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ လက်ရှိ တွေ့ထားတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ဆက်ဆံမှုက အမေရိကန်အနေနဲ့ စစ်တပ်ကို လိုချင်တာပဲ။ ဒီကနေ့ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သူ အာဏာရှိတယ်ဆိုတာ၊ ဥပဒေရဲ့အထက်မှာ စစ်တပ်က ရှိတယ်ဆိုတာ အမေရိကန် သိတယ်။ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်စုကို အသုံးချပြီးတော့ အမေရိကန်က ချဉ်းကပ်ပြီးတော့ (ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး) မင်းအောင်လှိုင်ကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာပေါ့။ (ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး) မင်းအောင်လှိုင် မသွားခင် ဒီလူတွေ လိုက်ပါသွားပြီးတော့ တွေ့ကြတယ်။
မြန်မာအစိုးရရော၊ အမေရိကန် အစိုးရရော တူညီတဲ့အချက်အလက်မှာ UWSA ကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ
သူတို့ နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးတဲ့ ထဲမှာ ပိုအရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်တယ်။
မြန်မာအစိုးရက သူတဦးတည်း UWSA ကို ကိုင်တွယ်လို့ မရဘူး။ ဖြေရှင်းလို့ မရဘူး။
ဖြေရှင်းလို့ မရဘူး။ တရုတ်ပြည် အားကိုး ဖြေရှင်းလို့ မရဘူး။ ဒီဟာက လောလောလတ်လတ် မြန်မာအစိုးရနဲ့ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးကြားမှာ ပြောနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာလို့
အချို့ကိစ္စမှာ UWSA ကို ဘယ်လို ကိုယ်တွယ်မလဲဆိုတာ
ပြဿနာက တော်တော် အရေးကြီးတဲ့ အခန်း ကဏ္ဍမှာ ပါတယ်။ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ UWSA ကို ကိုယ်တွယ်ရေး အရေးကြီးတဲ့တခုအနေနဲ့ ပါလာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရက တိုင်းပြည်ကို တစုံတရာ အကျိုးရှိအောင် ကစားမလား။ ဒါမှမဟုတ် သူလက်ရှိ အာဏာရှိထားတဲ့ လူတွေ အတွက်ပဲ သူ ကစားမလား။ တိုင်းပြည် လူထုအတွက် လုပ်မယ်ဆိုရင် အကျိုး အများကြီး ရှိပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်တဦးတည်း အမြင်က ဒီလို အမေရိကန် စစ်တပ်နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ဆက်ဆံမှုတွေမှာ တကယ်တမ်း
သဘောထားက မှန်မှန်ကန်ကန် တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကာကွယ်ရေး အကျိုးစီးပွား၊
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေး၊ တပ်မတော်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန် တဲ့ အချက်အလက်တော့ ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာ ကစားကြည့်တဲ့၊ ဟိုတုန်းက အန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ကြား ကစားသလို အမေရိကန်နဲ့ စကားပြီးတော့၊ ဟိုဘက်ဒီဘက် ခွပြီးတော့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်က ဒီထက်ပိုပြီး ဆင်းရဲတွင်း နက်ပါလိမ့်မယ်။
မန္တလေးမှာ Game ဆိုင်အမည်ခံ၍ ငွေကြေးဖြင့်လောင်းကစားပြုလုပ်
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၅၉လမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်းဒေါင့်ရှိ 59 ဆိုင်ကယ်ဝိုင်း အတွင်းတွင် တရုတ်လူမျိုးများသည် Game ဆိုင်အမည်ခံ၍ငွေကြေးဖြင့်လောင်းကစားပြုလုပ်နေကြပါတယ်.
Game ဆိုင်ဟုဆိုသော်လည်း လောင်းကစားပြုလုပ်နေကြသည့်ငွေကြေးပမာဏမှာ များပြားလွန်းသည်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နေပြည်သူများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလုပ်ငန်းများပါ ထိခိုက်နေပါတယ်...
Gameဆိုင်မှာအသုံးပြုတဲ့ Gameစက်တွေဟာလည်း နောက်ကွယ်မှ လျှပ်စစ်ဖြင့် ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်သောစက်များဖြစ်သောကြောင့် တဖက်သက် ဆန်စွာ မတရားငွေရှာနေခြင်းသာဖြစ်တယ်..
ဒီလောင်းကစားဝိုင်းတွေမှာ ဝင်ရောက်ကစားကြတဲ့ အများစုဟာ စီးပွားပျက်လောက်သည်အထိ ရှုံးနေကြပါတယ်..
တရုတ်လူမျိုးများဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီလိုဒုစရိုက်မှုနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေ နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ သမာဇီဝနှင့်ရှာဖွေထားသော စီးပွားဥစ္စာများကို တဖက်သက်ဆန်စွာ အရယူနေကြပါတယ်..
ဒီလို Game ဆိုင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ အိမ်ရှင်တွေကိုလည်း အံ့သြမိပါတယ်.သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း မသိတာလား မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတာလားတော့မသိဘူး.ဘာကိုမှဂရုမစိုက်ပဲ တရားဝင်လုပ်ငန်းသဖွယ်နေ့စဉ်စည်ကားနေတာကိုတွေ့နေရတယ်..
ဒီလိုပဲ လက်ခံထားနေမယ်ဆိုရင် နောင်တစ်ချိန် မန္တလေးမြိုဲ့ ကမြန်မာလူမျိုးတွေအကျင့်ပျက်ပြီးဒုစရိုက်မှုတွေကျူးလွန်လာနိုင်တယ်.,
ဒီလိုGame ဆိုင်မျိုးတွေ မန္တလေးမြို့ရဲ့နေရာအနှံ့မှာရှိပါတယ်
မြိန်ရာ ဟင်းကောင်း - တရွာပြောင်းလဲ မမေ့ နိုင်
လွန်ခဲ့ သော နေ့ က မိုးက ရွာနေသည် ။ နေ့ စဉ်ပင် လမ်းလျှောက်ဖြစ်မည်လားဆိုပြီး လမ်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့ သည် ။ သို့ သော် အမေရိကပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ ၏ ရာသီဥတုသည် နေသာသော နေ့ ရက်များ မရှိတတ်ချေ ။ မကြာခဏ မိုးရွာတတ်နေသော မြို့ ဖြစ်နေသည် ။ အိမ်ရှေ့မှ သစ်ပင်ကမူ အပွင့်တွေ မပွင့်သေး ။ အခြားသော လမ်းဘေး ပလက်ဖေါင်းမှာ စိုက်ထားသော သစ်ပင်တို့ မှာ အဆုပ်လိုက် ပွင့်ပြီး ကြွေကျခဲ့ ပြီး ဖြစ်သည် ။ ပန်းပွင့်တွေ အချပ်လိုက်ကြွေကျသော်လည်း အမှိုက်များမှာ မရှုပ်ပွ ၊ ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာ တနင်းဂနွေနေ့ -ဗုဒ္ဒဟူး-သောကြာနေ့ တိုင်း အမှိုက်ကား လာသိမ်းသည် ။ ယင်းနေ့ တွင် မိမိအိမ်၏ အမှိုက်ပုံးမှ ပလက်စတိတ်အိတ်ထုတ်ကို လမ်းမပေါ်တွင် တင်ထားပေးလိုက်ရသည် ။ မနက်အစောကြီးတွင် အမှိုက်ကားသည် သိမ်းယူသွား၏ ။ အိတ်မဲနှင့် ထည့်ရသောနေ့ -စက္ကူများသာ ထည့်ရသည့် အိတ်ဖြူ နှင့် ထည့်သောနေ့ စသည်ဖြင့် အမှိုက်သိမ်းယူသောနေ့ရှိခြင်းကြောင့် လမ်းတလျှောက်တွင် မည်သည့်အမှိုက်မှ မရှိချေ ။ ထို့ ကြောင့် သစ်ပင်မှ ကြွေကျသော ရွက်ဝါခြောက်နှင့် အပွင့်ကြွေများလည်း မိမိတို့အိမ်ရှေ့မှာ ဆိုလျှင် သိမ်းဆည်းထားကြပြီးဖြစ်သည် ။ အကယ်၍ အမှိုက်သိမ်းသောနေ့ တွင် သက်ဆိုင်သော အမှိုက်ထုတ် မဟုတ်ဘဲ လမ်းပေါ်တွင် ထားပေးခြင်း- အမှိုက်များ ရှုပ်ပွနေခြင်းများ ရှိလျှင်ကား စည်ပင် သန့် ရှင်းရေးဋ္ဌါနမှ ဒဏ်ငွေဆောင်ရန် စာကပ်ထားခဲ့ သည် ။ ဒဏ်ငွေကား အနည်းဆုံး -ဒေါ်လာ-၅၀၀- နီးကပါး ဖြစ်သည် ။
လမ်းတလျှောက် အမှိုက် မရှိသောကြောင့် ခြင်-ယင်တို့ လည်း မတွေ့ ရချေ ။ အမှိုက်ပုံးတွင် စားကြွင်းစားကျန်များ ထည့်ထားတတ်ကြသည် ။ သို့ သော် အညှီရှိရာကို ယင်ကောင်လာတတ်သော်လည်း နယူးယောက်မြို့ တွင် ယင်ကောင်မှာ ရှားပါးသတ္တ၀ါဖြစ်သည် ။ အသးငါးရောင်းသော ဆိုင်များတွင် ယင်ကောင်များကို တကောင်တလေမျှသာ မြင်တွေ့ ဖူးသည် ။ ရေခဲစိမ် ငါး-အသားများကို ရောင်းချနေသော ဆိုင်များတွင် စင်စစ်အားဖြင့် ငါးညှီန့ံများ ရှိနေမြဲဖြစ်သည် ။ သို့ သော် စနစ်တကျ ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ကာကွယ်ဆေးဖြန်းထားခြင်းကြောင့် ယင်ကောင်တို့မပေါက်ဖွားနိုင်ကြချေ ။
ကျွန်တော်တို့ သည် မကြခဏ ရခိုင်မုန့် တီကို ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြသည် ။ ငပိအန့ံသည် ဟင်းရည်ချက်ချိန်မှ တချိန်လုံး အိမ်ခန်းအတွင်း လှိုင်သင်းပျံ့နေ၏ ။ သို့ သော် ငပိနံ့ရ၍ ယင်ကောင်များ တကောင်တလေမျှ မမြင်ရ ။ ရှားပါးသော ယင်ကောင်မျိုးစိပ် သတ္တ၀ါများသည် နယူးယောက်မြို့ ၏ ကျန်းမာရေးဋ္ဌါန -မြို့ တော်စည်ပင်သန့် ရှင်းရေးဋ္ဌါနတို့ ၏ တင်ကြိုဆေးဖြန်း ထားပေးမှုကြောင့် ယခုလို မမြင်မတွေ့ ရခြင်းဖြစ်သည် ။ သည်အခါ ယင်ကောင်မှ တဆင့် ကူးစက်သော ၀မ်းကျဝမ်းဖေါ- ကာလ၀မ်းရောဂါ-စသည်တို့ သည် လူကို အန္တရယ် ပေးနိုင်စွမ်း မရှီတော့။ မှတ်မှတ်ရရ ပြောလျှင် ယင်ကောင်နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာတခုကို ပြောပြချင်သည် ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ တွင် ကြက်သားတွေကို ရောင်းချသည့်ဆိုင်၌ ယင်ကောင်တပ်မတော်တို့ဝိုင်းအံကိုက်ခဲ ပျံဝဲနေရာကို လက်ညိုးထိုးပြီး ၀ယ်စားဖူးခဲ့ ရသည် ။ တနေ့ တွင် ကြက်အရေပြားသက်သက်ကို စားသောက်ချင်၍ ယင်ကောင်များ အုံခဲနေသော ကြက်အရေပြားများကို ၀ယ်ခဲ့ ရသည် ။ အိမ်သို့ ရောက်ပြီး ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ပြီးသည့်တိုင် စားချင်သည့် စိတ် မရှိတော့ ။ မျက်စိထဲမှာ ယင်ကောင်ပေါင်း ထောင်သောင်းချီ၍ ၀ိုင်းအုံကိုက်ခဲနေသည်ကိုသာ မြင်ယောင်နေမိသည် ။ ထို့ ကြောင့် ယင်းနေ့ က ကြက်အရေပြားကို မစားသောက်ခဲ ။ စဉ်းစားတိုင်း ပျို့အံနေမိသည် ။ ယခုအချိန်ထိပင် ယင်ကောင်ပေါင်း ထောင်သောင်းမက အုံခဲ ပျံဝဲနေသော အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ ရှိ ကြက်သားဆိုင်များသည် ယင်ကောင်တပ်မတော်တို့ နှင့် အားကောင်းမောင်းသန် ရောင်းချနေတုံးဟု သိရသည် ။
နယူးယောက်မြို့ တွင် တရုပ်တန်းရှိသည် ။ ယင်းတရုပ်တန်း၌ အသား-ငါးများ လပ်လပ်ဆပ်ဆပ် ရောင်းချသည် ။ စတိုးဆိုင်ကြီးများက သန့် ရှင်းသည် ။ ယင်းဆိုင်များက တနေ့ တွင် မျှင်ခြောက်ဝယ်ယူခဲ့ သည် ။ ပုဇွန်တုပ်ကိုလည်း ၀ယ်ယူခဲ့ သည် ။ စင်စစ်အားဖြင့် ကျွန်တော်နေထိုင်သော ရပ်ကွက်တွင်လည်း ပုဇွန်တုပ်များကို စတိုးမှန်ခန်းတွင် ရှိုးကေ့စ်ဖြင့် ထည့်သွင်းရောင်းချလျှက် အမြဲတန်း တွေ့ ရမြဲဖြစ်သည် ။ သို့ သော် တိုက်ဆိုင်၍ ၀ယ်လာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည် ။
ပုဇွန်များကို ခေါင်းချိုးထားသော ပုဇွန်- အရေခွံ ချိုးထားသော ပုဇွန်များ ခဏခဏ ၀ယ်စားနေရသော်လည်း ပုဇွန်တုပ်ကား ဖေါင်းကြွနေပြီး တုပ်ခိုင်နေသော ပုဖွန်တုပ်မျိုးဖြစ်၍ ဈေးကြီးသော်လည်း အသားမရှိသောနေ့ ၌ စားသောက်နိုင်ရန် ၀ယ်ယူလာခြင်းဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်တို့ မှာ တခါတရံ အစားအသောက်များကို စားသောက်ရသောအခါ မွေးရပ်မြေကို ချက်ချင်း သတိရတတ်သည် ။ ချဉ်ပေါင်ဟင်းရည်သောက်ကို တဇွန်းမျှ သောက်ခပ်မိသည်နှင့် မိုးရွာနေတုံး မိသားစုထမင်းစားဝိုင်းတွင် စားသောက်ခဲ့ ရသည်များကို ချက်ချင်း သတိရဖြစ်သည် ။
နယူးယောက်မြို့ တွင် ချဉ်ပေါင်ရွက်ကား ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်သည် ။ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်လည်း သို့ အတူပင် ။ သဗြုသီးကိုလည်း မကြာမကြာ ၀ယ်စားရသောအခါ စိတ်ထဲမှာ တမျိုးခံစားရဖြစ်သည် ။ ယနေ့ တွင် မျှင်ခြောက်ကို လှော်ထားရာ အနံ့က ထွက်လာသည်နှင့် ထမင်းစားချင်စိတ် ပေါက်လာသည် ။ ဇွန်းတချောင်းနှင့် ကော်ပြီး စားကြည့်လိုက်တော့ ဆားငံနေသည် ။ ထမင်းစားသောအခါ သံဖုရာရည် ဆမ်းရသည် ။ ကြက်သွန်နီစိပ်နှင့် သံဖုရာချဉ်ရည် -နံနံပင် အုပ်ကာ မျှင်ခြောက်သုတ်သည်ကား ယနေ့ ကျွန်တော့် ထမင်းဝိုင်းကို တော်တော် စိုပြေစေသည် ။ ခါတိုင်းဆိုလျှင် ထမင်းဝိုင်းမှာ ကြက်သားတွေ-၀က်သားတွေ ရှိနေတတ်သည် ။ သည်နေ့ တွင် ၄င်းအသားဟင်းများကို မမြင် ။
ကျွန်တော် မြင်သော အသားဟင်းကား ပုဇွန်တုပ်ကြီးများကို ကြော်ချက်ထားသည်ကို မြင်ရသည် ။ -၄-လက်မ အရှည်ခန့် ရှိနေသော ပုဇွန်တုပ်ကြီးများက စတိုးဆိုင်များတွင် ခင်းကျင်းပြထားရာ၌ လူအများ မျက်စိကျစရာကြီးဖြစ်သည်။ ဈေးက အရမ်းကြီးသည် ။ ပလပ်စတိတ်နှင့် ထုတ်ပြီး ရောင်းချထားသော ၄င်းပုဇွန်တုပ်ကြီးများမှာ ဒေါ်လာ-၄၀- လောက်ကျသည် ၊ မျှင်ခြောက်သုတ်နှင့် ထမင်းမြိန်သော ကျွန်တော့်မှာ ပုဇွန်တုပ်ကြီးကို ဇွန်းနှင့်ခပ်ကာ တကောင်ယူစားလိုက်သည် ။ ပုဇွန်ကြော်သည်ကား ခါတိုင်းပုဇွန်အရသာနှင့် မတူဟု ထင်ရသည် ။ ထို့ ကြောင့် နောက်တကောင်ကို ထပ်မံစားကြည့်သည် ။ အရသာက ပေါ့ပျက်နေသည် ။ ပုဇွန်တုပ်ကြီးများ ထည့်ထားသော ပလက်စိတ်အိတ်ကို ရေခဲသေတ္တာမှ ထုတ်ယူကြည့်လိုက်သည် ။ ယခုမှ ရိပ်မိသွားသည် ။ အသားမစားသောသူများအတွက် အတု ( Vegan Imitation ) -ဆိုသော စာသားကို မြင်တော့သည် ။ တိုင်ဝမ်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရောင်းချသော သက်သက်လွပ် စားသောက်သူများအတွက် ဤပုဇွန်တုပ်အတုဟင်းကို ကျွန်တော် မြိန်ရေယှက်ရေ စားသောက်ဖြစ်ရသည် ။ အကယ်၍ မြိန်ရာဟင်းကောင်း ဆိုသလို အစားအသောက်တခုကို စားသောက်မိလျှင် ခင်ရာမင်ရာ ဆွေမျိုး တသိုက်ကို ပေးကမ်းချင်ကြသည် ။ မျှင်ခြောက်သုတ်နှင့် နံနံပင်ဖြူးပြီး သံဖုရာဆမ်းထားသော အခါ စားရသော ထမင်းဝိုင်းကား ကျွန်တော့်အဖို့မမေ့နိုင်တော့ပြီ ။ ပို၍ မမေ့ နိုင်သည်မှာလည်း ပုဇွန်အတုကြီးကို အားရပါးရ စားဖြစ်သောကြောင့်လည်း မမေ့ နိုင်ဟု ဆိုက မှားမည် မထင် ။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ မျှင်ခြောက်သုတ်ကို စားရသောနေ့ - လိပ်ကျောက်သားဟင်းရည်သောက် စားရသောနေ့ - ရူးဇနားငါးကို စားသောက်ရသောနေ့ - သဗြုသီးနှင့် ပိန်းစွယ်တို့ ဖြင့် စားသောက်ရသောနေ့ ကား ကျွန်တော့်အတွက် မြိန်ရာဟင်းကောင်း တရွာပြောင်းလဲ မမေ့နိုင်ဟု ပြောစရာတွေ အများကြီး ရှိနေသည် ။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေ မျှင်ခြောက်သုတ်သည်ကား ကျွန်တော့်အဖို့ မွေးရပ်မြေကို အမှန်ပင် လွမ်းဆွတ်စေပါသည် ။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၅၇ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဂျာကာတာမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးအား ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်မှုတွင် ကြိုးကိုင် စီစဉ်သူဟု ယူဆရသူတဦးကို အင်ဒိုနီးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင် ဖမ်းဆီးရမိလိုက်သည်။
ည ၈ နာရီခွဲအချိန်က ဂျာကာတာမြို့တော် မြောက်ပိုင်း၌ ဖမ်းဆီးရမိသူ ဆီဂျစ် ဆိုသူမှာ ရဲက အလိုရှိနေသူ တဦးလည်းဖြစ်ပြီး မြန်မာသံရုံးအား ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်မှုတွင် ဦးဆောင်သူ တဦးအဖြစ်လည်း သံသယရှိ ထားသူဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဘွိုင် ရဖ်လီ အမားရ် အား ကိုးကား၍ အေပီ သတင်းတရပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
၎င်းအား ဖမ်းဆီးရမိပြီး ၆ နာရီအကြာ ကြာသပတေးနံနက်ပိုင်းတွင် မြို့တော်၏ အနောက်ပိုင်း တနေရာ၌ ရိုဟာဒီ ဆိုသူအား ဗုံးလုပ်သည့် ယမ်းနှင့် ပစ္စည်း တန်ဆာပလာများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
မေလ ၉ ရက်နေ့ကလည်း သံရုံးအား ဗုံးခွဲရန် ကြံစည်မှုတွင် ပါဝင် ပတ်သတ်သည်ဟု ယူဆရသည့် အစ္စလာမ်မစ် စစ်သွေးကြွများကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၂၄ နာရီကြာ စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ သီးခြား စစ်ဆင်ရေး သုံးခုအတွင်း စုစုပေါင်း စစ်သွေးကြွ ၇ ဦး အသေဖမ်းမိ ခဲ့ပြီး အခြား စစ်သွေးကြွ ၆ ဦးကို အရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
ဂျာကာတာ သံရုံးအား ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မည့် မသင်္ကာသူ နှစ်ဦးကို မေလ ၂ ရက်နေ့ညက လက်လုပ်ဗုံး ငါးလုံးနှစ်အတူ မြို့လယ်တွင် စတင်ဖမ်းဆီးရမိပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ဆက်တိုက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်များအပေါ် တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကို လက်တုံ့ပြန်သည့် အနေနှင့် ထိုသို့စီစဉ်ခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ကြောင်း သင်္ကာမကင်း ဖြစ်ခံရသူများက အာဏာပိုင်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ယမန်နှစ်ကလည်း အကျဉ်းကျ အစွန်းရောက် အစ္စလမ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သည့် အဘူ ဘာကာ ဘာရှီးရား (Abu Bakar Bashir) က မြန်မာ သမ္မတထံသို့ စာရေးကာ မူဆလင်များ ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရ သည့်အတွက် တိုက်ခိုက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
ဘာရှီးယားသည် အယ်လ်ကိုင်ဒါ အဖွဲ့နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် စစ်သွေးကြွများ၏ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်ပြီး ယင်းအဖွဲ့သည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သော လူအသေ အပျောက်များသည့် တိုက်ခိုက်မှုများ ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူများလည်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ဘာရှီးယားက ခြိမ်းခြောက်ခဲ့အပြီး တလအကြာ၌ အသေခံ ဗုံးခွဲမည့်သူက စိတ်ပြောင်းသွားပြီး ရဲထံ အညံ့ခံခဲ့သည်။ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်ခဲ့ပါသည် ဟုလည်း သူက ပြောသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် မူဆလင်များအကြား အဓိကရုဏ်း အကြမ်းဖက်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယခုနှစ် မတ်လအတွင်းတွင် မိထ္ထီလာမြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာနှစ်ဘက် သေကြေမှု ရာကျော် ရှိခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်တယ်။ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ရင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းကို ဆက်လျှောက်မယ်လို့ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ ပြောကြားခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ပြောဆိုနေရုံနဲ့မပြီးပဲ အလုပ်နဲ့ပါသက်သေပြဖို့သင့်ပြီလို့ ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
"ပြောစကားတွေထက် အလုပ်ကို နည်းနည်းပြဖို့လိုလာပြီလို့ ထင်ပါတယ်၊ ဘာပဲပြောပြော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်တယ်ဆိုတာ အခု ၃ နှစ်ပြည့်တော့မယ်၊ ၃ နှစ်ဆိုတာဟာ ရေတိုပဲ၊ အဲတော့ ရေတိုအကျိုးစီးပွားတွေကို မြင်ဖို့လိုလာပြီ၊ ရည်ရွယ်ချက်တို့ လုပ်ချင်တာတို့ ပြောတာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ အခုကျတော့ ဘာလုပ်နိုင်လဲ၊ ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကို ပြဖို့အချိန် ရောက်လာပြီလို့ ထင်ပါတယ်"
တရုတ်ခါင်းဆောင်တွေက NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို မြစ်ဆုံရေကာတာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ချင်တဲ့အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အဲဒီကိစ္စဟာ သူတို့ပါတီနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အချက်မဟုတ်ဖူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
"ဒီမြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းနဲ့ဆိုရင် အခုအစိုးရကနေ ပြောရမှာလို့၊ ဘာဖြစ်လို့ ကျမတို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပြောတာလဲလို့၊ ကျမတို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ၊ ဒါသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပဲ၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ပြောပေ့ါ"
ဒါ့အပြင် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရအနေနဲ့ အခုအချိန်ထိ ပွင့်လင်းမှုမရှိဖူးလို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်လာဈေးအား ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ ဆွဲတင်မည်ဟု ပြောခဲ့သည့်နောက် ဒေါ်လာဈေး ဆက်တိုက် ထိုးတက်သည်။
ဘဏ်ရုံးချုပ် အပါအ၀င် ဘဏ်ခွဲ ၉ ခုသာရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဘဏ်သည် ဗဟိုဘဏ်၏ နေ့စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေလံပွဲတွင် ရက်ဆက်ဆိုသလို အင်အားကြီး ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ ပေးနိုင်သည့် ဈေးထက်များစွာ ပိုပေးကာ ထိပ်ဆုံးမှ လေလံအောင်နေသည်။
ထိပ်ဆုံးမှ လေလံအောင်သူသည် မိမိဝယ်လိုသည့် ပမာဏအတိုင်း ဗဟိုဘဏ်မှ ၀ယ်ခွင့်ရသည်။ ဒေါ်လာအများစုမှာ ဘဏ်ခွဲ ၉ ခုသာ ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဘဏ်လက်ဝယ် နေ့စဉ်နီးပါး ရောက်သွားသည်။
အခြားဘဏ်များသည် လိုသလောက် ၀ယ်မရဘဲ ဗဟိုဘဏ်မှ ရောင်းပေးသည့် ပမာဏသာရသည်။ ဘဏ်ခွဲမြောက်များစွာဖြင့် လည်ပတ်နေသည့် ဘဏ်များ၌ ဒေါ်လာ လိုသလောက် ၀ယ်မရသည့် အခြေအနေကို ဖန်တီးလိုက်သည့် အသွင်ဆောင်နေသည်။
ဈေးကွက်အတွင်း ၀ယ်လိုအားအတိုင်း မပေးနိုင်သည့်အတွက် ဒေါ်လာဈေး တက်သွားသည်။ ဗဟိုဘဏ်မှလည်း ဈေးမထိန်းဘဲ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ငွေလဲနှုန်းကို မြှင့်တင်ဆွဲတင် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်မီး မလုံလောက်မှုကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ ဒီဇယ်ဆီကို မဖြစ်မနေ သုံးနေချိန်၊ ကားအစီးရေ များပြားလာသည့်အတွက် စက်သုံးဆီ ပိုမိုတင်သွင်းနေရချိန်တွင် နေ့စဉ်ဈေးကွက်အတွင်း စက်သုံးဆီ တင်သွင်းရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းနီးပါး သုံးနေရသည့် ကာလတွင် ဈေးကွက်အတွင်း ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်အား တစ်ရက်လောက် လုပ်လိုက်နိုင်သည်နှင့် ဈေးဆွဲတင်ချင်သူများ အတွက် မလွဲမသွေ အခြေအနေကောင်းကို ဖန်တီးပေးပြီးသား ဖြစ်သွားသည်။
ကျပ် ၁၀၀၀ အထိမရောက်သေးဘဲ ၉၃၅ ကျပ်အထိ ဈေးမြင့်တက်သွားသည့် အနေအထား၌ပင် စက်မှုဇုန်၊ စက်ရုံများအားလုံး ဒီဇယ်ဈေး မြင့်တက်သည့်ဒဏ် စတင်ခံစားရပြီဖြစ်သည်။ ဒီဇယ်တစ်တန် ကျပ် ၅၀၀၀၀ ဈေးတက်သွားသည် . . .
ဗဟိုဘဏ်၏ နေ့စဉ်ဈေးတိုးမြှင့် နေမှုကြောင့် ဒေါ်လာဈေးထပ်တက်မည် စိုးသည့်အတွက် ဒေါ်လာလိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များ ကြိုဝယ်မှုများပြားပြီး မလိုအပ်ဘဲနှင့် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် ပိုမိုမြင့်တက် သွားရပြန်သည်။
ဈေးကွက်အတွင်း ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားမှ ဈေးဆွဲတင်တာ မဟုတ်၊ ဈေးကွက် ၀ယ်လိုအားကြောင့် တက်ခြင်းဟု တာဝန်ရှိသူများရော၊ ၀င်ကစားသူများပါ ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
သို့သော် မပြေးသော်လည်း ကန်ရာရှိ အခြေအနေ အရပ်ရပ်သည် တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ ဈေးဆွဲတင်နေသည်ဟု ပြော၍ရနိုင်သည့် အနေအထားသို့ ဦးတည်သွားသည်။
မေ ၁၃ ရက်က တစ်ဒေါ်လာ ၉၀၄ ကျပ်၊ မေ ၁၆ ရက်တွင် တစ်ဒေါ်လာ ၉၂၉ ကျပ်ဖြင့် သုံးရက်အတွင်း ဗဟိုဘဏ်မှ ၂၅ ကျပ်အထိ ဈေးဆွဲတင်လိုက်သည်။
ပြင်ပဈေးကွက်တွင် မေ ၁၆ ရက်က တစ်ဒေါ်လာ ၉၃၇ ကျပ် အထိ မြင့်တက်သွားပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်နေသည့် ဈေးကွက် ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားသည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက် နိုင်ငံခြား ငွေလဲနှုန်းကို နှုန်းရှင်သတ်မှတ်လိုက်သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂ ရက် နောက်ပိုင်း ၁၃ လကျော် ကာလအတွင်း ယခင် တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၈၀၀ ၀န်းကျင်မှ မေ ၁၇ ရက်တွင် တစ်ဒေါ်လာ ၉၃၅ ကျပ်အထိ တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၁၃၀ ၀န်းကျင် မြင့်တက်သွားသည်။
ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ မရောက်သေး ပဲ ၉၃၅ ကျပ်အထိ ဈေးမြင့်တက်သွားသည့် အနေအထား၌ပင် စက်မှုဇုန်၊ စက်ရုံများအားလုံး ဒီဇယ်ဈေး မြင့်တက်သည့်ဒဏ် စတင်ခံစားရပြီ ဖြစ်သည်။ ဒီဇယ်တစ်တန် ကျပ် ၅၀၀၀၀ ဈေးတက်သွားသည်။
စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တက်မှုကြောင့် မကြာမီ သယ်ယူပို့ဆောင် စရိတ်မြင့်တက်မှုပေါ် အခြေခံကာ စားသောက်ကုန်အချို့ ဈေးတက်တော့မည်။
လက်ရှိ၌ပင် စားအုန်းဆီ တစ်ပိဿာ ကျပ် ၁၀၀ စတင်ဈေးတက်ပြီး စားသုံးသူ အများပြည်သူကို ထိခိုက်စ ပြုပြီဖြစ်သည်။
ဈေးတက်သည့်အတွက် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများ ကောင်းလာမည်ဟု ဆိုသော်လည်း မွေးမြူသူများ ငါးမမွေး နိုင်သည့်အချိန်၊ တောင်သူများ လက်ထဲသီးနှံ မရှိချိန်ဖြစ်၍ အချည်းနှီး ဖြစ်နေသေးသည်။
အဆိုးရွားဆုံး အချက်အနေဖြင့် တက်သင့်တက်ထိုက်သည့်နှုန်း မဟုတ်ဘဲ ခုန်တက်သည့်အတွက် အစိုးရအဖွဲ့၊ ၀န်ကြီးဌာနအားလုံး ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းများအပေါ် အနည်းနှင့်အများ ထိခိုက်တော့မည်။
စီမံကိန်းများအတွက် ၀န်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲ တင်ပြချိန်တွင် ဒေါ်လာဈေးမှာ တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၈၆၀ နှုန်းလောက်ဖြင့် တွက်ချက်တင်ပြထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများမှသုံးမည့် ငွေပမာဏ တစ်ခုတည်းသည်ပင် ကျပ်ဘီလျံ ၇၇၂၀ ဒသမ ၈၂၀ ကျော် (ကျပ် ၈၆၀ နှုန်းဖြင့် ဆိုပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၉၈ ဘီလျံ) အထိရှိသည်။
စီမံကိန်း အများစုမှာလည်း ပြည်ပမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် တင်သွင်းသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာ အများဆုံး အသုံးပြုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခု တစ်ဒေါ်လာ ၉၃၅ ကျပ်ဖြင့် တွက်ချက်ပါက အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၂၆ ဘီလျံသာ ရှိတော့သည့်အတွက် ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်မှု အချက်တစ်ချက်တည်းကြောင့် ဒေါ်လာ သန်း ၇၂၀ အလို အလျှောက် လျော့ကျသွားပြီဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းများအတွက် မူလမှန်းထားသည့် ကုန်ကျငွေ ပမာဏထဲမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၂၀ လိုအပ်သွားသည့် သဘောဖြစ်သည်။
ယင်းမှာ ၉၃၅ ကျပ်နှုန်းဖြင့်သာ ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ ဆွဲတင်ပစ်လိုက်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၂၅၀ ကျော် လိုအပ်သွားမည့် အနေအထားဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမှာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည့် နှုန်းအထိ မြင့်တက်ရမည်ဖြစ်ပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နှုန်းတစ်ခုဖြင့်သာ တစ်နှစ်လျှင် ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ တစ်ဆင့်ချင်း တက်သင့်သည်ဟု ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များက နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဈေးနှုန်း အပြောင်းအလဲများအပေါ် အခြေခံ ပြောကြားကြသည်။
ယခုလပိုင်းအတွင်း ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်မှုသည်ပင် ကျပ် ၈၇၀ မှ ၉၃၅ အထိ တွက်ချက်လျင် ၈ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကျပ် ဆိုလျှင် တစ်နှစ်အတွင်း ကျပ်ငွေနှင့် ဒေါ်လာလဲနှုန်း မြင့်တက်မှုသည် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိသွားပြီး ဖြစ်သင့်သည့်၊ တက်သင့်သည့်နှုန်းထက် များစွာမြင့်မားနေမည် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာရွှေဈေး ကျဆင်းနေသည့်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တန်ဖိုးမှာ နိုင်ငံတကာတွင်ပါ မြင့်တက်နေသည်။ သို့သော် ၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ အမြင့်ဆုံးတက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ ပုံမှန်နှုန်းထက် မြင့်မားစွာ ထိုးတက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်လာသည့်အတွက် ယခင် တစ်ဘတ် ၂၉-၃၀ ကျပ် မှ ယခု ၃၂ ကျပ် အထိဖြစ်လာပြီး ယွမ်ဈေးမှာလည်း တစ်ယွမ်လျှင် ၁၄၀ မှ ယခု ၁၄၅ ကျပ်အထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး ဆက်တိုက်မြင့်တက်သည်မှာ အမှန်တကယ် ဈေးကွက်အရ မြင့်တက်ခြင်း သို့တည်းမဟုတ် နိုင်ငံအတွက် မြင့်တက်သင့်၍ မြင့်တက်ခြင်းဆိုလျင် အကျိုးပိုရှိနိုင်သော်လည်း ကစား၍ လည်းကောင်း၊ လူနည်းစုအတွက် လည်းကောင်း ရုတ်တရတ် မြင့်တက်ခြင်း ဆိုလျှင်မူ ထိခိုက်မှုများ ပိုများနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်၊ စီးပွားရေးပညာရှင်နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များကမူ တက်သင့် တက်ထိုက်သည်အထိ တည်ငြိမ်စွာ မြင့်တက်ခြင်း၊ ငွေကြေး တန်ဖိုးအား တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်သာ နည်းလမ်းအမှန်ဟု သုံးသပ်ထားကြသည်။
credit: ( အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဂျာနယ် )
ဘန်ခွန်ခရိုင်ရှိ ကွန်ဒိုအခန်းများမှ ဖမ်းဆီးရမိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြန်လည်ရောက်ရှိ
Created on Thursday, 23 May 2013 04:10
အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမားနှင့် အိမ်ဖြူတော်၌ တွေ့ဆုံရန် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ သုံးရက်ကြာ သွားရောက်ခဲ့သော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် မေ ၂၂ ရက် ည ၁၀ နာရီကျော်က ကိုရီးယား လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ယခု ခရီးစဉ်သည် ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ ဂျွန်ဆင်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း အိမ်ဖြူတော်သို့ သွားရောက်ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၄၇ နှစ်အတွင်း မြန်မာခေါင်းဆောင် တစ်ဦး အိမ်ဖြူတော်သို့ သွားရောက်သည့် သမိုင်းဝင်ခရီးစဉ် ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် မေ ၁၇ ရက် ည ၁၁ နာရီခွဲခန့်က ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ စတင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး မေ ၁၈ ရက်တွင် အမေရိကန်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကာ ယင်းနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ၀ါရှင်တန်ရှိ လင်ကွန်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည်။
မေ ၁၉ ရက်တွင် ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ရှိ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ပထမဆုံး သမ္မတ ဂျော့ရ်ှဝါရှင်တန်၏ အိမ်တော်တည်ရှိရာ မောင့်ဗာနွန် ဥယျာဉ်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဂျော့ရ်ှဝါရှင်တန်၏ ဂူဗိမာန်တွင် ပန်းခွေချ ဂါရ၀ ပြုခဲ့သည်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် အခက်အခဲ မျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရကြောင်း၊ အခြေခံ အကြောင်းအရင်းမှာ ဆင်းရဲမှုနှုန်း မြင့်မားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ အတွေ့အကြုံ အားနည်းခြင်း၊ အရည်အချင်းရှိသည့် လူလတ်တန်းစား နည်းပါးခြင်း . . . . .
ထို့နောက် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားနှင့် မေ ၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့် (မြန်မာစံတော်ချိန် မေ ၂၁ ရက် နံနက်အစောပိုင်း) က တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သမ္မတ အိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အကူအညီများ ပေးသွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ဒီမိုကရက်တစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖော်ဆောင်နေမှုများ ရှေ့ဆက်ဖြစ်ပေါ်ရေး ကတိပြုခဲ့သည်။
ထို့ပြင် နှစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ လွှတ်တော်တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ အကျိုးအတွက် အားလုံးပါဝင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းသစ်ကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံက အောင်မြင်အောင် ကူညီပံ့ပိုး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် သမ္မတ အိုဘားမားက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း မိမိတို့ နိုင်ငံကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် အခက်အခဲ မျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရကြောင်း၊ အခြေခံ အကြောင်းအရင်းမှာ ဆင်းရဲမှုနှုန်း မြင့်မားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ အတွေ့အကြုံ အားနည်းခြင်း၊ အရည်အချင်းရှိသည့် လူလတ်တန်းစား နည်းပါးခြင်း စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် အမေရိကန်ရှိ နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်း တက္ကသိုလ်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိမိတို့၏ အကျိုးစီးပွားများ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆန့်ကျင်ဖျက်ဆီးလိုသူများ ရှိနေနိုင်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မြန်မာ-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး ခေတ်သစ်ထူထောင်ရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို တရားဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကချင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု မကြာမီ ရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း စသည်ဖြင့်လည်း မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနေ့တွင်ပင် အမေရိကန် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူလတ်တန်းစားများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် အမေရိကန် ကုမ္ပဏီများ လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံစေရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထီးကျန်ဖြစ်မှုကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေး ဖြစ်ပေါ်လာရန်အတွက် ကူညီပေးရန်လည်း အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်။
မေ ၂၀ ရက်၌ပင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ဟီလာရီကလင်တန်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ Dr.Jim Yong Kim နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဟီလာရီ ကလင်တန်နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ကလင်တန်ဖောင်ဒေးရှင်း အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိရေး၊ မိခင်နှင့် ကလေး အသေအပျောက်နှုန်း လျော့နည်းရေး၊ လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ရရှိရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖူလုံစွာ ရရှိရေး၊ ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ် အသုံးပြုရေး၊ ဆေးရုံသုံးနှင့် ဆေးဝါးပစ္စည်းများ ရရှိရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးကူညီရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသနေ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ မြှင့်တင်ရေး၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရေးတို့တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ငွေကြေးအကူအညီများ ပေးအပ်ရေးတို့ကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ခရီးစဉ်အတွင်း ၀ါရှင်တန်ပို့စ်၊ ဗွီအိုအေ အသံလွှင့်ဌာန၊ CNN စသည့် သတင်းဌာနများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြုပြင်နိုင်ရေး အပိုင်းများ၊ တပ်မတော်၏ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် အခန်းကဏ္ဍများ၊ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ စသည်တို့ကို ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အမေရိကန်ရောက် မြန်မာမိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်သော မေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားခဲ့သည်။
ခရီးစဉ်သို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့ အပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတ၏ ယခုကဲ့သို့ သမိုင်းဝင် ခရီးစဉ်အပေါ် နိုင်ငံကြီးတစ်ခုနှင့် ပိုမိုရင်းနှီးမှု ရှိလာနိုင်ခြင်းနှင့် ကျန်ရှိနေသေးသော စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖြေလျှော့ပေးနိုင်သည့် အလားအလာများ ပိုများသွားနိုင်ခြင်းကြောင့် ကောင်းမွန်သော အလားအလာတစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် လေ့လာသူများက သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
မန္တလေးမှာ Game ဆိုင်အမည်ခံ၍ ငွေကြေးဖြင့်လောင်းကစား...
မြန်မာသံရုံး တိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်မှု ကြိုးကိုင်သူ အ...